मंगलग्रहमा मानव बस्ती बसाल्न चाहन्छन् विश्वकै धनि व्यक्ति,किन खुशी छैनन् पृथ्वीमा ?
सोमबार, माघ १२, २०७७
एजेन्सी आईतबार, पुस २६, २०७७, १५:०४:००
काठमाडौँ -टेस्ला र स्पेस एक्सका सिईओ इलोन मस्क विश्वकै सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका छन् । ब्लुमबर्गका अनुसार बिहीबार टेस्लाको शेयरको मूल्यमा ४ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धी भयो र मस्कको कुल सम्पत्ती १८८ दशमलव ५ अर्ब डलर पुग्यो । अमेजनका मालिक जेफ बेजोसको सम्पत्ती १८७ अर्ब डलर छ ।
संसारकै धनी व्यक्ति बनेका मस्क त्यतिबेलासम्म उनी खुसी हुनेछैनन्, जबसम्म मानिसलाई मंगलग्रहसम्म पु¥याउन सक्नेछैनन् । उनले २०१६ मा यस्तो बताएका थिए । ‘हामीले त्यतिबेलासम्म खुसी मनाउन हुँदैन । जबसम्म हामी मंगलमा आफ्नो बस्ती बसाउन सक्दैछौं ।’
एक वर्षअघि अर्थात् जनवरी २०२० मा ब्लुमबर्गले तयार गरेको विश्वका धनाढ्यहरुको सूचीमा मस्क ३५ औँ नम्बरमा थिए । तर १० महिनामा उनले बिल गेट्सलाई पछि पारे, अहिले जेफ बेजोसलाई उछिनेर पहिलो नम्बरमा छन् ।
१० वर्षमै बनाएका थिए भिडियो गेम
इलोन मस्कको जन्म २८ जून १९७१ मा दक्षिण अफ्रिकाको प्रिटोरियामा भएको थियो । उनकी आमा माये मस्क क्यानेडियन मोडल हुन् । दक्षिण अफ्रिकी मुलका बाबु एरोल मस्क इलेक्ट्रो मेकानिकल इन्जिनियर हुन् । इलोन जब ९ वर्षका थिए, तब उनका बाबु–आमाको डिभोर्स भयो । १० वर्षको उमेरमा उनले कम्प्युटर कोडिङ कोर्स सिके । त्यसपछि उनले ‘ब्लास्टर’ नामको भिडियो गेम बनाए । उनले यस गेमलाई १२ वर्षको उमेरमा ५ सय डलरमा बेचेका थिए ।
इलोनसँग दुुईवटा डिग्री छन् । उनले इकोनोमिक्समा एउटा र फिजिक्समा अर्को डिग्री हासिल गरेका छन् । १९९५ मा उनी पिएचडीका लागि अमेरिकाको स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयमा भर्ना भए । तर, दुुई दिनभित्रै छाडिदिए किनकी उनी आफ्नै नयाँ व्यवसाय सुरु गर्न चाहन्थें ।
लगानीकर्ताका रुपमा टेस्लामा इन्ट्री
कतिपयलाई इलोन मास्कले नै टेस्ला कम्पनी स्थापना गरेका थिए भन्ने पनि लाग्ला । तर यो साँचो होइन । टेस्ला मोटर कम्पनीको सुरुवात २००३ मा मार्टिक एबरहार्ड र मार्क टारप्यानिङले गरेका थिए । फेब्रुअरी २००४ मा इलोन मास्कले यसमा ७५ लाख डलर लगानी गरे । यस लगानीसँगै उनी टेस्लाको अध्यक्ष पनि बने ।
अक्टूबर २००८ मा उनी टेस्लाको सिईओ बने । यतिबेलासम्म कम्पनीमा उनले ७ करोड डलर लगानी गरिसकेका थिए । जून २०१० मा टेस्लाले आईपिओ लन्च ग¥यो । यससँगै कम्पनीको शेयर १ हजार २ सय २९ प्रतिशत बढ्यो ।
तर, एक समय यस्तो पनि आएको थियो, जतिबेला टेस्लाले ऋण लिनुप¥यो । २००९ मा टेस्लाले अमेरिका सरकारसँग ४६ दशमलव ५ करोड डलर ऋण लियो । यो ऋण उसले २०१३ मा चुक्ता ग¥यो ।
टेस्लामा कति कमाउँछन् इलोन मास्क ?
इलोन मास्कसँग टेस्लाको २० दशमलव ८ प्रतिशत शेयर छ, यसको भ्यालु अहिले १ सय ५० अर्ब डलरभन्दा धेरै हुन आउँछ । पछिल्लो एक वर्षमा टेस्लाको शेयर ७ सय प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ । यही कारण गत वर्षधनाढ्यको सुचीमा ३५ औं नम्बरमा रहेका मस्क अहिले पहिलो नम्बरमा आएका हुन् ।
२०२० मा मस्कको कुल सम्पत्ती १ सय ४० अर्ब डलरभन्दा धेरै वृद्धी भयो । फोब्र्सले धनाढ्यहरुको सुची बनाउन थालेयता एकै वर्षमा कोही व्यक्तिले यति धेरै कमाएको यो पहिलो पटक हो ।
रोचक कुरा, मस्कले टेस्लाबाट नियमित तलब लिदैंनन् । उनले २०१९ मा २३ हजार ७ सय ६० डलर न्युनतम तलबका रुपमा बुझेका थिए । क्यालिफोर्नियामा न्युनतम तलब दिनै पर्ने कानूनका कारणमात्रै कम्पनीले उनलाई यो रकम दिएको हा । २०२८ सम्म मस्कलाई टेस्लाबाट तलब मिल्नेछैन । त्यसो भए मस्कले यति धेरै रकम कमाए कहाँबाट ? खासमा मस्क र टेस्लाबीच एक खाले सम्झौता भएको थियो । यसमा कम्पनीको बोर्डले १६ वटा कोशेढुंगा तय गरेको छ । इलोन मास्कलाई यो पूरा गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । जब एक कोशेढुंगा पार हुन्छ, तब मस्कले कम्पनीको करिब १७ लाख डलर शेयर पाउँछन् ।
यस सम्झौताअन्तर्गत मस्कले आगामी १० वर्षमा टेस्लाबाट २ दशमलव ०२ करोड शेयर १२ किस्तामा पाउँछन् । मई २०२० मा उनलाई १७ लाख तलब मिलेको थियो ।
कोरोनाले असर गरेन
२०२० मा कोरोना भाइरसले संसारभर तबाही मच्चायो । अझै पनि महामारीको प्रभाव कायम छ । तर, टेस्ला कम्पनीमा यसको कुनै असर परेन । २ जनवरी २०२० मा टेस्लाको शेयरको मुल्य ८६ दशमलव शुन्य ५ डलर थियो । ८ जनवरी २०२१ मा यो मुल्य बढेर ८ सय १६ दशमलव ०४ डलर पुग्यो । अर्थात्, वर्षदिनभरमा कम्पनीको शेयरको मुल्य झन्डै ८ सय ५० प्रतिशतले बढ्यो । शेयरको मुल्यमात्रै होइन, कम्पनीको फाइदा पनि जर्बजस्त बढेको छ ।
इलोन मास्क स्पेसएक्सका पनि सिईओ हुन् । स्पेसएक्स प्राइभेट कम्पनी हो र सुचिकृत छैन, त्यसैकारण यसको वास्तविक तथ्याङ्क बाहिर आउँदैन । जुलाई २०२० मा मोर्गन स्टेनलीको अनुसन्धानले स्पेसएक्सको मार्केट भ्यालु २ सय अर्ब डलरसम्म हुनसक्ने आँकलन गरेको थियो ।
सिएनबीसीको रिपोर्टअनुसार स्पेसएक्समा मस्कको १५ दशमलव ३ अर्ब शेयर छ । यसबाहेक उनी बोरिङ कम्पनीका पनि पसंस्थापक हुन् । मस्कले यो कम्पनीको सुरुवात २०१८ मा गरेका थिए । यस कम्पनी ११ दशमलव २ करोड डलरबाट सुरु गरिएको थियो, जसमध्ये ९० प्रतिशत लगानी मस्कको थियो ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, पुस २६, २०७७, १५:०४:००
विषम मौसमी घटनाबाट यस शताब्दीमा ४ लाख ८० हजारको मृत्यु
सिक्किममा चीन र भारत सेनाबीच झडप, दुबैतिरका २४ सैनिक घाइते
चीनमा सन् २०२० मा करिब दुई खर्ब घन मिटर प्राकृतिक ग्यास उत्पादन
राष्ट्रपति बाइडेनका चुनौती : तीन दिनभित्र ३० वटा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर
१९ वर्षीया किशोरी एक दिने मुख्यमन्त्री
शनिबार थप २३२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, ३८६ जना संक्रमणमुक्त
पुरानै नेकपा आधिकारिक पार्टी हो : निर्वाचन आयुक्त थपलिया
चौतारोमा बसेर अध्यक्ष घोषणा गर्नेलाई निर्वाचन आयोगले उचित जवाफ दिए : प्रधानमन्त्री ओली
२४ घन्टामा थप ३३९जनामा कोरोना पुष्टि, ४०१ जना संक्रमणमुक्त
सर्वोच्चले विवेक प्रयोग गर्छ, संसद् पुनर्स्थापना हुन्छ
१५ वर्षीया बालिका र ४३ वर्षीय पुरुषबीच हुन लागेको विवाह रोकियो
रुकुम हत्या प्रकरण-प्रधानमन्त्रीज्यू छोराहरु मरे,न्याय नमरोस
निर्मला हत्या प्रकरण -निलम्बित एसपी विष्टलाई पुनर्बहाली गर्ने सरकारको निर्णय
कैलालीमा प्रहरी हत्याकाण्डका योजनाकार पक्राउ
© आजको न्युज -2021 All rights reserved. Site by: SoftNEP